Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Kooxda Lufthansa waxay ku dhawaaqday Sarkaalka Sare ee Istaraatijiyadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Jörg Eberhart ayaa loo magacaabay Madaxa Istaraatiijiyadda Kooxda Lufthansa
Jörg Eberhart wuxuu baddali doonaa William Wilms, oo loo magacaabay Guddiga Fulinta ee Lufthansa Technik 1da Sebtember 2021.
Kooxda Lufthansa waxay ku dhawaaqday magacaabis cusub oo fulineed.
Madaxa Cusub ee Istaraatijiyadda & Horumarinta Abaabulka oo la magacaabay.
Jorg Eberhart wuxuu xilka la wareegi doonaa Noofambar 1, 2021.
Oktoobar 1, 2021, Jörg Eberhart, oo hadda ah madaxa shirkadda Air Dolomiti, ayaa la wareegi doona jagada “Madaxa Istaraatiijiyadda & Horumarinta Abaabulka” ee Kooxda Lufthansa. Wuxuu beddeli doonaa William Wilms, oo loo magacaabay Guddiga Fulinta ee Lufthansa Technik 1dii Sebtember 2021.
Jörg Eberhart wuxuu soo noqday madaxweyne iyo agaasimaha guud Air Dolomiti tan iyo 2014. Muddadan, wuxuu sidoo kale xubin ka ahaa Guddiga Sare ee Lufthansa CityLine. Intaas ka hor, wuxuu xilal badan oo maamul ka soo qabtay Kooxda Lufthansa taas oo ay ka mid ahayd ka mid ahaanshaha aasaaska Aerologic GmbH iyo hirgelinta mashruuca SCORE.
Jörg Eberhart ayaa maamulka ganacsiga ka bartay Jaamacadda Tübingen wuxuuna haystaa shatiga duulimaadka ee Airbus A320.
Kooxda Lufthansa waa koox duulimaad oo ka hawl gasha adduunka oo dhan. Iyada oo leh 110,065 shaqaale, Kooxda Lufthansa waxay soo saartay dakhli dhan EUR 13,589m sannad maaliyadeedka 2020.
Kooxda Lufthansa waxay ka kooban tahay qaybaha Shabakadaha Diyaaradaha, Eurowings iyo Adeegyada Duulista.
Adeegyada Duulistu waxay ka kooban yihiin qaybaha Saadka, MRO, Cunto -qabadka iyo Ganacsiyo Dheeraad ah iyo Hawlaha Kooxda.
Kuwa dambe ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah Lufthansa AirPlus, Tababarka Duulista Lufthansa iyo shirkadaha IT -ga. Dhammaan qeybahu waxay haystaan ​​kaalin hoggaamineed suuqyadooda.